खास शीघ्र स्खलन के हो ? कसै कसैको पेन्टीमै स्खलन हुन्छ त्यसको उपचार यस्तो छ -डा. राजेन्द्र भद्रा - Bulletin Nepal
आफ्नो जन्मदिन पारेर साथीलाइ बृद्धाश्रम-विद्युतीय गाडी किन्दा सहुलियतमा ऋण पाइने-उपत्यका तीन जिल्लामा अबदेखी राति ८ बजेदेखि बिहानसम्म मात्रै ट्रिपर चलाउन पाउने-पोखरीमा डुबेर रुपन्देहीमा एक किशोरको मृत्यु-इनरव्हील क्लब अफ मिड टाउन बुटवलको अध्यक्षमा राधा भट्टराई-थारु भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनु पर्नेमा सांसदहरुको जोड-सुनकाण्डमा पत्रकार पनि समातिए-बैंकले दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर घट्यो-चिन जाने २ गैंडा ट्रक चडेर काठमाडौ पुगे-भासियो नारायणगढ - मुग्लिन सडकखण्ड, सवारी आवागमन एकतर्फी
खास शीघ्र स्खलन के हो ? कसै कसैको पेन्टीमै स्खलन हुन्छ त्यसको उपचार यस्तो छ -डा. राजेन्द्र भद्रा
सुरु गरौँ, एउटा उदाहरणबाट ।
चन्द्रकुमार २१ वर्षका भए । विवाह भएको ४ महिना भयो । १९ वर्षको हुँदा उनलाई एउटी केटी साथीसँग यौन सम्पर्कको अवसर मिलेको रहेछ । तर, यौन सम्पर्कमा उनी सफल हुन सकेनन् । योनीमा लिङ्ग प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै वीर्य स्खलन हुन पुगेको थियो ।
यस कुराले भावी वैवाहिक जीवनमा असर पार्ला कि भन्ने चिन्ता उनमा थियो । नभन्दै बिहेपछि पनि यो क्रम दोहरिन पुगेको छ । एक–दुई पटक बाहेक राम्ररी यौन सम्पर्क राख्न नै पाएका छैन भन्छन् उनी ।
श्रीमतीका सामुन्ने उनी लाजले भुतुक्कै हुुने गरेका छन् तर यसबारे केही बोल्न पनि सक्दैनन् । अहिले उनलाई हीनतावोधले सताएको छ । यौन सम्पर्क नै गर्न नसक्दा वैवाहिक जीवन नै खत्तम हुने हो कि भन्ने कुराले बिथोलिएका छन् चन्द्रकुमार ।
वीर्य स्खलन कति समयमा हुन्छ त ?
चन्द्रकुमार जस्तै कैयौं पुरुषले आफ्नो यौन जीवनमा शीघ्र स्खलनको समस्या भोगेका हुन्छन् । यस्तो समस्या परेपछि चासो र चिन्ता हुन्छ नै । यस्ता समस्या बारम्बार हुन थालेमा यौन तथा पारिवारिक जीवनमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता स्वभाविक रूपमा आउँछ । शीघ्र स्खलन किन हुन्छ वा कसरी यसलाई कम गर्न सकिएला भन्ने बारे धेरैलाई पर्याप्त जानकारी नरहेको पाइन्छ । शीघ्र स्खलन बारे कुरा गर्नुभन्दा पहिले वीर्य स्खलन बारे जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।
मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रको कुरा गर्दा हामीहरू मुख्यतया चार चरणबाट गुज्रन्छौँ । सुरुको चरणलाई उत्तेजनाको चरण भनिन्छ र यौन उत्तेजनाले निरन्तरता पाएमा हामी अर्को चरणमा पुग्छौं, जसलाई ‘प्लेटो’ चरण भनिन्छ ।
यस अवस्थामा पनि यौन उत्तेजनाले निरन्तरता पाइरहेमा हामी छोटो भए पनि एक विशेष तथा महत्वपूर्ण चरणमा पुग्छौँ, जसलाई ‘चरमसुख’ भनिन्छ । यसैबेला नै वीर्य स्खलन पनि हुने गर्दछ । यसपछि ‘रिजोलुसन’को चरण आउँछ, जसलाई हामी सामान्य अवस्थाका रूपमा बुझ्दछौँ ।
‘किन्से’ले गरेको अध्ययनले योनीमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषले चरमसुख पाएको कुरा देखाएको थियो । अर्को एक अध्ययनमा सालाखाला समय तीन मिनेट रहेको देखिएको थियो ।
किन्सेले महिलालाई चरमसुखको स्थितिसम्म पुग्न यस्तै ४ मिनेट लाग्ने उल्लेख गरेका छन् भने केही अध्ययनहरूले पुरुषको तुलनामा महिलालाई चरमसुख पाउन यस्तै ५ मिनेट जति बढी समय लाग्ने जनाएका छन् ।
खास शीघ्र स्खलन के हो ?
प्रायः सबैजसो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै बेला वीर्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । शीघ्र स्खलनको समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौन सम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो ।
सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा, वीर्य स्खलन चाँडो हुनुलाई नै शीघ्रपतन भनिन्छ । शीघ्र स्खललाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने बारे वैज्ञानिकहरूबीच निकै बहस चलेको पाइन्छ ।
लिङ्गलाई योनीमा पसाएको ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा पाँचदेखि १० धक्कामा नै वीर्य स्खलन भएमा छिटो स्खलन भएको भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास पनि भए । तर, अहिले यो सोचाइमा परिवर्तन आउन थालेको छ ।
कम्तिमा दुई वर्ष विवाहित जीवन बिताइसकेका पुरुषहरू सम्मिलित एक अध्ययनले के देखायो भने, स्वस्थ व्यक्तिको सालाखाला ३ दशमलब १ मिनेटमा वीर्य स्खलन भएको थियो भने छिटो वीर्य स्खलन भयो भनेर ठान्ने व्यक्तिहरूको २ दशमलब ३२ मिनेटमा ।
कतिपय सामान्य वीर्य स्खलन भएका व्यक्तिले पनि आफ्नो वीर्य स्खलन छिटो भएको ठानेका थिए भने कतिपयले सोभन्दा कम समयमै वीर्य स्खलन हुने भए पनि छिटो वीर्य स्खलन भएको नठानी सामान्य नै ठानेका थिए ।
त्यसैले होला शीघ्र स्खलनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सोचमा परिवर्तन आएको छ । अहिले आफू तथा आफ्नो यौनजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्य स्खलन भएमा त्यसलाई छिटो वीर्य स्खलन अर्थात् शीघ्र स्खलन भएको स्थिति मान्न थालिएको छ ।
शीघ्र स्खलनको कारण के हो ?
एकथरी पुरुषहरूमा यो समस्या सुरुदेखि नै अर्थात् किशोरवयदेखि रहेको हुन्छ । अर्काथरीमा पहिले वीर्य स्खलन ठिकै समयमा हुने गरेको भए पनि पछि मात्र शीघ्र स्खलनको समस्या देखिएको हुन्छ । यो समस्या कुनै शारीरिक बिमारीका कारणले हुँदैन । र, कुनै रसायनको प्रयोगसँग पनि यो सम्बन्धित हुँदैन ।
महिलालाई चरमसुखको स्थितिसम्म पुग्न एकदमै समय लाग्ने तथ्यमा आधारित रहँदा कतिपय अवस्थामा पुरुषले शीघ्र पतनको अनुभव गरेका हुन पनि सक्छन् । यो कुरा पनि बिर्सनु हुन्न कि, केही महिला योनी मैथुनबाट चरमसुखको स्थितिसम्म नपुग्ने पनि हुन सक्छन् ।
वीर्य स्खलनभन्दा पहिले आउने रसलाई वीर्य निस्केको ठान्ने स्थिति पनि रहने गरेको हुनाले त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले यौन चलचित्रमा देखाइएका कुरालाई आफूसँग दाँज्ने गर्दछन् र आफ्नो वीर्य चाँडो स्खलन भएको ठान्न सक्छन् । चलचित्रमा अस्वाभाविक रूपमा घन्टौँ यौन सम्पर्कमा संलग्न भएजस्तो देखाइको हुन सक्छ ।
शीघ्र स्खलनको पक्का कारण यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अहिले यो समस्याको मूल कारण मानसिक सोचाइ नै हो भन्न सकिन्छ । शीघ्र स्खलन हुनुले पुरुषको प्रजनन प्रणाली वा स्नायु प्रणालीमा शारीरिक रूपमा कुनै खराबी भएको अर्थ लगाउने वैज्ञानिक आधार छैन ।
कतिपय मानिसलाई यौन सम्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु चिन्ताको कारण हुन सक्छ । आफ्नो यौन जोडीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिन कि भन्ने चिन्ता नै यस्तो समस्याको कारक हुने गर्दछ । केही अनुसन्धानकर्ताले प्रजनन अङ्ग सञ्चालनसँग सम्बन्धित स्नायुका कार्य प्रणाली र हर्मोनको मात्रासँग पनि यो विषयलाई जोडेर हेरेका छन् ।
अझै रोचक कुरा त के छ भने, कसैकसैले विकासवादको सिद्धान्तसँग पनि जोडेका छन् । विकासको क्रममा शीघ्र स्खलन गर्न सक्ने पुरुषहरूले नै बढीभन्दा बढी महिलालाई गर्भधारण गराउन सक्ने भएको र मानव विकास इतिहासको हजारौँ वर्षमा यस्ता पुरुषको बृद्धि भएको उनीहरूको तर्क छ ।
शीघ्र स्खलनलाई कसरी कम गर्न सकिएला ?
आक्कल–झुकक्ल शीघ्र स्लखनको समस्या हनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले यस्तो स्थितिमा खासै अनावश्यक चिन्ता गर्नु हुँदैन । शीघ्र स्खलनको समस्या नियमित रूपमा हुन थाल्यो भने पक्कै पनि तपाईंले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यौन जीवन सुखमय हुन नसक्दा पारिवारिक जीवनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । शीघ्र स्खलनलाई कम गर्ने उपाय सुरु गर्नासाथ चटक्कै समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु ठीक नहोला । यस्ता उपायको प्रयोगबाट सफलता हासिल गर्न धैर्यता अनि निरन्तर प्रयासको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
१. यौनसम्पर्क रोक्ने – सुरु गर्ने : यौन सम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होलाजस्तो भएपछि तुरुन्तै लिङ्गलाई योनीबाट बाहिर झिकेर केहीबेर यौन क्रीडालाई नै रोक्ने र यौन उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौनक्रीडा सुरु गर्ने । यसो गरेमा शीघ्र स्खलनको समस्यालाई कम गर्न केही सहज हुन्छ । अर्को कुरा, स्खलन होलाजस्तो भए पनि यौन सम्पर्कलाई रोकेर ध्यानलाई अर्कै कुरातर्फ लगाउन सकियो भने पनि मद्दत पुग्छ ।
२. आसन परिवर्तन गर्ने : धेरैजसो नेपाली जोडीमा लोग्ने मान्छे माथितिर र महिला तलतिर रहेर यौन सम्पर्क गर्ने चलन छ । यसो गर्दा विशेषतः पुरुषहरू मात्र सक्रिय हुन्छन् र यौन सम्पर्कलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा पुरुषलाई वीर्य स्लखन नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन सक्छ । त्यसको सट्टा महिला माथितिर राखेर सक्रिय गराई यौन सम्पर्क गरेमा पनि शीघ्र स्खलनलाई कम गर्न सकिन्छ । यौन सम्पर्क गर्दा धक्काको प्रकार तथा गतिलाई एउटा लय दिएमा वीर्य स्खलन पनि ढिलो हुन पुग्छ । यदि, यौनसाथीलाई गति वा प्रकारमा परिवर्तन गर्नुपरे वा रोक्नुपरे संकेत गरेर वा स्पष्ट भन्नुपर्ने हुन्छ ।
३. लिङ् अँठ्याउने : यौन सम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होलाजस्तो भएपछि तुरुन्तै लिङ्ग योनीबाट बाहिर झिकेर लिङ्गको फेदलाई बेस्सरी अँठ््याउने र वीर्य स्खलन हुन नदिने । यौन उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौनक्रीडा सुरु गर्ने ।
४. वीर्य नलीलाई थिच्ने : वीर्य निस्केला जस्तो भएपछि अन्डकोष तथा मलद्वारबीचको नरम भागमा यस्तै तीन–चार सेकेन्ड थिचेमा वीर्य स्खलनलाई रोक्न सकिन्छ । यो कार्य आफैँले वा यौनसाथीले गरिदिए पनि हुन्छ ।
५. मांशपेशीको प्रयोग गर्ने : हामीले पिसाब गर्दा रोक्दै गर्दै गरिरहेका हुन्छौँ । पिसाव र रोक्न प्रयोग हुुने मांशपेशीलाई अंग्रेजीमा ‘प्युवोकक्सिजियस मसल’ भनिन्छ । यही मांशपेशीको कसरत गरेर जसरी पिसाब रोक्छौँ त्यसैगरी वीर्य स्खलनलाई रोक्ने अभ्यास गर्न सकेमा पनि फाइदा पुग्छ ।
६. कन्डमको प्रयोग गर्ने : त्यस्तैगरी कन्डमको प्रयोगबाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्खलनको समस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस्तो बेला चिप्लो पदार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको कन्डमले बढी फाइदा पु¥याउँछ ।
७. औषधिको प्रयोग : अचेल छालाको संवेदनशीलता कम गर्ने मल्हम तथा ‘स्प्रे’हरू पनि बजारमा उपलब्ध छन् । ‘बेन्जोकाइन’ तथा ‘लिडोकाइन’ जस्ता औषधि भएका यस्ता उत्पादन लिङ्गमा प्रयोग गर्दा शीघ्र स्खलनलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ ।
८. वीर्य स्खलन नियन्त्रणको अभ्यास : दीर्घकालीन उपचारका लागि हस्तमैथुन गर्ने र वीर्य स्खलन होलाजस्तो भएपछि रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः हस्तमैथुन सुरु गर्ने र वीर्य स्खलन होलाजस्तो भएपछि रोक्ने र यो प्रक्रिया दोहो¥याउने । वीर्य स्खलनलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि आफ्नो यौनसाथीसँग यौन सम्पर्क रहित यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुने अर्थात् हस्तमैथुन वा पाक्कक्रीडा जस्तै क्रियाकलापमा संलग्न हुने तर यौन सम्पर्क भने नगर्ने ।
वीर्य स्खलन होलाजस्तो भएपछि क्रियाकलाप रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने । आफ्नो यौनसाथीसँग पहिले कुनै चिप्लो पदार्थ प्रयोग नगरीकन र पछि चिप्लो पदार्थ प्रयोग गरेर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुने ।
अब वीर्य स्खलनमा पर्याप्त नियन्त्रण भयो जस्तो लागेपछि लिङ्गलाई विस्तारै भगक्षेत्र (योनी क्षेत्र) मा स्पर्श वा हल्का घर्षण गर्ने, तर यौन सम्पर्क भने नगर्ने ।
यस्तो गर्दा वीर्य स्खलन होलाजस्तो भएमा यी क्रियाकलाप गर्न रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने । वीर्य स्खलनलाई पर्याप्त नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि माथि भनिएजस्तै पहिले यौनसाथी बढी सक्रिय हुने गरेर यौन सम्पर्क सुरु गर्ने ।
अनि वीर्य स्खलनको नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति वा क्षमतालाई हेर्दै विविध तरिका अवलम्बन गर्दै यौन सम्पर्कलाई अघि बढाउने । समय र धैर्यता निकै लाग्ने भए पनि वीर्य स्खलन नियन्त्रणमा यो अभ्यास निकै लाभदायक हुन सक्छ ।
र, यो पनि बुझौँ
यी सबै अभ्यास अनि सफलताका लागि हप्तौँ वा महिनौँ लाग्न सक्छ । दृढ अठोट तथा धैर्यता यसका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ । यस कार्यमा आफ्नो यौनसाथीको सहयोग तथा समझदारी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
शीघ्र स्खलनको समस्या भएका पुरुषका लागि यौनसाथीको समझदारीपूर्ण सहयोगले मनमा भएका चिन्ता हटाउन अनि आत्मविश्वास जगाउन मद्दत गर्छ । यौनसाथीको कुनै पनि नकारात्मक किसिमको टिप्पणीले समस्यालाई बढाउने गर्दछ । माथि भनिएका उपाय कार्यान्वयन गर्दा एकै पल्टमा वीर्य स्खलनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएला र स्खलन भइहाल्ला तर निरास हुनु हँुदैन ।
यदि, मनमा वीर्य स्खलन हुन नदिई लिङ्गलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराको निकै नै गहिरो छाप परिसकेको छ भने सजिलै पार पाउन गाह्रो पनि हुन सक्छ ।
मुख्य कुरा त, तपाईंले आफ्नो मनबाट यी कुरा हटाउन सक्नुपर्छ । यौन सम्पर्कको असफलता वा असन्तुष्टि बारे मात्र सोच्नुभन्दा पहिलेभन्दा अहिले कति सुधार गर्न सकियो भन्नेतिर ध्यान दिइयो भने समस्या कम गर्न मद्दत मिल्छ ।
श्रोत: स्वाथ्य खबर पत्रिका
लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल सटर टेन्डरमा बिबाद चर्कियो, अध्यक्षको आव्हान, मेसुद्धारा स्थगित
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुपन्देहीले एकदिने सशक्तिकरण तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला सम्पन्न
तिलोत्तमा सुनचादी व्यवसायी संघद्रारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
प्रदेशस्तरिय थेरापी कार्यशाला बुटवलमा, ‘थेरापी चिकित्सा प्रणालीमा महत्पूर्ण विधा ’
इनरव्हील क्लब अफ मिड टाउन बुटवलको अध्यक्षमा राधा भट्टराई
सुनकाण्डमा पत्रकार पनि समातिए
बैंकले दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर घट्यो
चिन जाने २ गैंडा ट्रक चडेर काठमाडौ पुगे
भासियो नारायणगढ – मुग्लिन सडकखण्ड, सवारी आवागमन एकतर्फी